Taorian’ny Fanafihana Tao Nice, Efa Tsapa Sahady Ny Voka-dratsiny Eo Amin’ny Fizahantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2016 9:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, Français
Toeram-pandinihana tampotampoka ao amin'ny Promenade des anglais, taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro nahafatesana olona marobe tamin'ny 14 Jolay 2016. Sary avy amin'ny mpanoratra (teny frantsay)
Tsy nahatonga an'i Nice ho ao anaty tebiteby sy horohoro ihany ny fanafihana tamin'ny 14 jolay, fa nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny sehatry ny fizahantany izay efa ratsy. Tsy mitovy ny ao amin'ireo tanàna fizahantany niharan'ny fampihorohoroana vao haingana tahaka ny tao Grand-Bassam ao Côte d'Ivoire, Sousse tao Tunis sy Charm el-Cheikh tao Ejypta ny fiantraika ara-toekarena fa azo antoka fa nitondra takaitra mafy teo amin'ny sehatra efa anaty olana ao Frantsa ity loza ity.
Mahazo vola betsaka amin'ny fizahantany i Nice sy ny manodidina azy. Miteraka voka-dratsy goavana eo amin'ny toekarena ao amin'ny faritra ny fahavoazana rehetra mety mihatra amin'ny fizahantany. Aorian'i Paris, Nice no tanàna be mpitsidika indrindra ao Frantsa.
Araka ny tahirin'ny Biraon'ny fizahantany tamin'ny taona 2015, nahasarika 40 % tamin'ireo mpizahan-tany 5 tapitrisa nitsidika ny Côte d’Azur ny tanànan'i Nice, niteraka tombony ara-toekarena isan-taona 1,5 miliara euros. Mandrafitra ny 40 % amin'ny harinkarena faobe ao amin'ny faritra ny sehatry ny fizahantany ary mampiasa olona 119 000. Ny hetran'ny fahazoa-mivahiny fotsiny ohatra dia nahazoana 33 tapitrisa euro tamin'ny taona 2014.
Mitatitra ny tranonkalan'ny ara-pizahantany industrie-hoteliere.com hoe:
Milaza ny filohan'ny sendikan'ny trano fandraisam-bahiny ao Nice Côte d'Azur, Denis Cippolini fa « maro ny fanafoanana famandrihana » ary mihevitra izy fa «hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny asa ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sy ny ririnina ».
Ho an'ireo matihanina eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny (hotely) ao Côte d’Azur, tsy amin'ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany andro mafana 2016 ihany no olana fa mihoatra noho izany. Miombon-kevitra ireo trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoana sy ny fisotroana kafe fa ho tsapa ao amin'ireo tanàna manodidina tahaka an'i Cannes, Antibes/Juan les Pins na Monaco ihany koa ny voka-dratsy, satria raisin'ny any ivelany indrindra indrindra, tahaka ny hany tokana sy toerana faleha mitovy ny Côte d'Azur . ….
Noho ny fiverimberenan'ny fanafihana nahafatesana olona tao amin'ny firenena nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2015, dia mahita fihemorana lehibe amin'ny fidirana amin'ny trano fandraisam-bahiny, indrindra ny mpanjifa avy ao Etazonia, Afovoany Atsinanana sy Azia ireo matihanina eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Niseho ny krizy tamin'ny fotoana nisian'ny tompondaka Eoropeana amin'ny baolina kitram-pirenena Euro2016, nanomboka nahazo aina tsikelikely ny fizahantany taorian'ny fahavoazana nateraky ny fanafihana tao Paris tamin'ny taona 2015. Touriscope, tranonkalan'ny Mpanaramaso ny Fizahan-tany ao Côte d'Azur rnilaza fa:
Mbola madio kokoa ny fiverenana amin'ny vola miditra avy amin'ireo mpanjifa ireo, izay tafakatra teo amin'ny 200 € isan'andro ny fandaniana (124 € tamin'ny herintaona tamin'ny fotoana mitovy amin'izany). Amin'ireo fampiantranoana ara-barotra, mijaly amin'ny tsy fahampian'ny tinady amin'ny Fialam-boly (latsaka dimy [isanjato] tamin'ny volana Mey) ireo trano fandraisam-bahiny kintana 2-3 sy ny trano fonenana ho an'ny fizahantany, saingy toa tsara kokoa ny zava-misy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny kintana 4- 5
Amin'io sokajy io dia tsy nihetsika ny fahatetehan'ny fidirana indray alina na izany tamin'ny volana Mey na tamin'ny 5 voalohan'ny volan'ny taona.
Nanonitra ny fihenan'ny fidirana indray alina Frantsay ny fitomboan'ny vahiny ao amin'ny kintana 4-5 (+4%). Amin'io sehatra lafo vidy kokoa io, mitombo 8,5% ny vola miditra isaky ny efitra fatoriana misy (RevPar) tamin'ny volana voalohan'ny taona, hatramin'ny 182€ HT (trano fandraisam-bahiny ao an-tanandehibe).
Tsy ao an-tanànan'i Nice ihany no misy ny fiantraika ara-toekarena. Manome tarehimarika momba ny fahavoazana tamin'ny tsena ara-bolan'i Paris ny tranonkala 2012un-nouveau-paradigme.com :
Tao Paris, tratran'ny teritery ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fitaterana, nosazian'ireo mpampiasa vola. Taloha kelin'ny tamin'ny 10 ora, matiantoka 3,39% amin'ny sanda 37,29 euros ny vondrona hotely AccorHotels, matiantoka 3,60% amin'ny sanda 7,25 euros ny mpampanofa fiara Europcar ary matiantoka 2,05% amin'ny sanda 5,88 euros ny vondrona zotra an'habakabaka Air France-KLM. Eurotunnel very 0,73% ary ADP 0,43%. Amin'ny ankapobeny, ny tondron'ny fizahantany sy ny fitaterana, amin'ireo tratran'ny fihenana betsaka indrindra isaky ny sokajin'asa, dia nanary 0,66%.
«Tsy maintsy mizaka ny fiantraikan'ny halozana nitranga tao Nice, faritra tena ara-pizahantany amin'izao vanim-potoana mafana izao» ny sehatry ny fizahatany, hoy ny fampitandreman'ny mpanera Aurel BGC, mampahatsiahy fa «milanja mihoatra ny 7% amin'ny harinkarena anatiny frantsay ny fizahantany». Nitsipihan'ny mpanera fa «vao nanomboka niarin-doha indrindra ny sehatr'asa tao Frantsa, indrindra taorian'ny Euro izay tontosa tsy nitrangan-javatra nanahirana loatra (ankoatra ireo fifanandrinana nifanaovan'ny hooligans tao Marseille) ary taorian'ny ako nampitain'ny gazety, dia nahafahana nampakatra indray ny famandrihana tanatin'ny ora farany tao amin'ny firenena».
14 Jolay (2014), Nice, Frantsa. Teo amoron-dranomasina ambanin'ny Promenade des Anglais, takarivam-pianakaviana. Fahafahana, Firahalahiana, Fitoviana! Saripika Flickr an'i Michael Foley (CC BY-NC-ND 2.0)
Fa tsy i Frantsa irery no tra-pahasahiranana tamin'ireny fanafihana ireny teo amin'ny sehatra fizahantany.
Nilaza ny ahiahiny amin'ny mety isian'ny fifangaroana noho ny fiaviana magrebiana na ara-ara-pivavahan'ilay mpampihorohoro i Mohamed Rial, blaogera maraokana eo amin'ny sehatry ny fizahantany ao Maraoka. Mety hiteraka randra-tarihana mahatsiravina ho an'ireo tanànam-pizahatany tahaka an'i Marrakech ireny heloka bevava ireny, araka ny ahiahiny:
Ho tratran'ny fiantraikan'ireny fanafihana ireny ihany koa ny tanàna tahaka an'i Marrakech, izay ny fizahatany indrindra no ivon'ny asa ara-toekarenany. Mandeha ho azy izany ho an'ny toeram-pandehanana izay i [Frantsa] no lohalaharana amin'ny fandehanana any amin'ny taha 40%. Mizaka ny fialam-pitiavan'ny mpizahatany frantsay mihamahazo vahana isan-taona ity tanàna volontany ity, sy i Agadir, hatramin'ny taona 2012. Nitranga izany noho ny fifangaroana naterak'ireny fanafihana ireny ao an-tsain'ny mpandehandeha.
Araka ny tatitra farany fanao isan-taona navoakan'ny Sendikan'ny orinasa frantsay misahana ny fitetezan-tany (Seto), iray amin'ireo mpanome fitsangatsanganana am-pehezana (dia+fonenana) loahalaharana mankany Maraoka, dia nanjavona toy ny zavona sisa tra-maraina ny mpanjifan'ny fandraharahana frantsay misahana ny fitsangatsanganana. Tamin'ny volana jona farany teo, nahitana fihenana 38% ny fotoam-pialantsasatra mankany Maraoka ary i Portiogaly, ny vondro-nosy mizaka tena Baléares ary Italia indray no nahazo tombony amin'izany.
Tao anatin'ny fotoam-pihenjanana indrindra no nankatoavan'ny governemanta ny fanalavana enimbolana indray ny firenena misy hotakotaka. Manazava ao amin'ny tranonkala europe-solidaire.org ny fiantraikan'ity fepetra ity ny Vondron'Olompirenena “Nous ne céderons pas” (Tsy hihemotra izahay) ary namoaka izao fehin-kevitra manaraka izao:
Raha namoaka ny tatitra parlemantera nivoaka farany momba ny “fahalatsahana an-katerena” fa voafetra ihany ny fisorohana vitan'ny fomba fitondrana lazaina ho maningana, dia hipetraka mandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny toe-draharaha manilika tsikelikely ny anjara andraikitry ny mpitsara mpanao famotorana, mpiantoka ny fahalalahan'ny tsirairay ary manome vahana ny fahefana mpanatanteraka i Frantsa. Fantatsika ankehitriny fa nampiasaina tamin-javatra hafa fa tsy ady amin'ny fampihorohoroana ny “fahalatsahana an-katerena”, natao indrindra izany hanakanana ny fihetsiketsehana sy hanidiana an-trano manokana ireo mpitolona ara-politika ary izany rehetra izany dia tsy misy idiran'ny ady amin'ny fampihorohoroana.